Madaxda Somaliya Oo Heshiis Ka Gaadhay Qodobbadii Khilaafku Ka Taagnaa - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxda Somaliya Oo Heshiis Ka Gaadhay Qodobbadii Khilaafku Ka Taagnaa
Xilli weli uu magaalada Dhusamareeb uu ka socda shirka dowlad goboleedyada, gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in isu soo dhawaasho ay jirto.
Madaxwayne kuxigeenka Galmudug, Cali Daahir Ciid oo BBC u waramay ayaa sheegay in illaa iyo hadda uu shirka si habsami leh uu u socdo.
Waxaa uu intaa ku daray in ay jiraan qodobo is-faham laga gaaray.
Cali Ciid ayaa carrabka ku dhuftay in qodobka soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka ee gobolladii Waqooyi ama Somaliland ay dhinacyada is-fahan ka gaareen.
“Qodobkii ugu horreyay oo ah dhanka Somaliland inta aan ogahay is-fahan aad u ballaaran ayaa laga gaaray, waxna way ka dhiman yihiin,” ayuu yiri madaxwayna kuxigeenka Galmudug.
Waxaa uu intaa ku daray in wadaxaajoodka qodobka soo xullidda xubnaha baarlamanka Somaliland ay ku lug lahaanayaan gudoomiyaha aqalka sare iyo ra’iisul wasaara kuxigeenka xukuumadda federaalka.
“Waxaan kuu sheegi karaa oo keli ah in arrinta xildhibaannada Somaliland meel fiican ay mareyso oo is-fahan u dhawdahay aadna dhinacyada isugu soo dhawaadeen ra’iisul wasaara kuxigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare-na ay ku lug leeyihiin oo ay ka qeyb qaadanayaan,” ayuu yiri Cali Ciid.
Madaxwayna kuxigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa sidoo kale sheegay in qodobada kale ee uu muranka ka taagnaa ay weli socdaan wadaxaajoodyada.
Cali Ciid ayaa xusay in arrinta gudiga doorashada iyo qodobka gobolka Gedo ay maanta madaxda ka wadahadlayaan.
“Qodobada kale ee ku saabasn guddiga doorashada iyo waxa laga tataaban karo iyo arrinta Gedo oo u dambeysa weli lama guda gelin, markaa illaa iyo hadda si habsami leh ayuu shirkaas u socdaa,” ayuu yiri.
Waxa uu sheegay in qodobka guddiga doorashada ay muuqato in intii hore la isaga soo dhawaaday.
“Sida muuqata aad ayay isugu dhaw yihiin labada dhinac marka laga hadlayo guddiyada doorashada,” ayuu yiri Cali Ciid.
Waxaa uu dhanka kale sheegay Cali Ciid in qodobka gobolka Gedo lagu wado in maanta ay madaxda guda galaan.
“Qodobkaas weli lama guda galin, waxaana la guda galayaa maanta oo si fiican loo falanqeynayaa,” ayuu inta ku daray.
Waxa uu rajo ka muujiyay shirka oo la filayo in xal looga gaaro khilaafka ka dhashay hannaanka doorashada ee xilligii loo asteeyay dib uga dhacday.
Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shalay ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo in uu ka hor istaagay inuu ka qaybgalo shirka Dhuusamareeb.
“Waxaan ka xumahay muddadaa uu jiray Aqalka Sare in madaxweyna uusan aqoonsanin, tixgelinin waajibaadkaa dastuuriga ah ee dastuurka siiyay Aqalka Sare, khilaaf kasta iyo wadahadal kasta oo dhexmara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada,” ayuu yiri Cabdi Xaashi.